कोरोना (कोभिड–१९) र समाजको डर - NEPAL KHABAR PATI
कोरोना (कोभिड–१९) र समाजको डर
म्याग्दी संबाददाता - 2020 Sep 01 06:45 PM Tweet
नविन कुमार रौनियार
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण देश मा कतै निषेधाज्ञा छ त कतै लकडाउन छ । देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ, भने निको हुनेको संख्या पनि उतिकै बढेको छ । तर कोरोना संक्रमित र उनीहरूलाई दुव्र्यवहार, अपमान र त्रास दिने काम समाजमा अझै भैरहको छ ।
कोरोना सङ्क्रमितको आत्मबल बढाउनु पर्ने बेलामा हामी उनिहरुलाई हेला गर्ने गर्छौ । आफु सुरक्षित रहनु पर्छ तर स्वास्थ्यकर्मी, कोरोना सङ्क्रमितहरुलाई छिछी दुरदुर गरेर पक्कै पनि आफु सुरक्षित हुन्नौ । आफु सामाजिक दुरी नमान्ने , माक्स प्रयोग नगर्ने र कुनै पनि स्वास्थ्य सावधानी नअपनाउने अनि उनिहरुको आत्मबल नै कमजोर हुने गरी उनिहरुलाई सामाजिक बहिस्कार गर्नेले गर्दा कुनै पनि व्यक्ति आज यसबारे खुलेर बोल्न सक्दैनन ।
कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरुलाई सद्भाव र सहयोगको खाँचो हुन्छ तर सहयोग र सद्भाव परको कुरा हामी उनिहरु सँग बोल्न समेत रुचाउदैनौ । कुनै पनि रोग जित्न आत्मबल निकै बलियो हुनु पर्छ तर हामी उनिहरुको आत्मबल नै गिराउने खालको व्यवहार गर्छौ ।
समाजले गर्ने भेदभाव छिछी र दुरदुरले नै अहिले पनि कोरोनाको लक्षण भएका धेरै मानिसहरु घर भित्रै लुकेर बस्न वाध्य छन । धेरै मनिसहरुले कोरोनाको परिक्षण गर्दा आफ्नो पहिचान पनि लुकाएको पाइन्छ यो केबल समाजबाट हुने भेदभावबाट बाँच्न हो । हाम्रो यस्तो व्यवहारले के हामी सुरक्षित छौ त? मेरो बिचारमा अहिले अधिकांश ठाउँमा देखिएका व्यवहारले सिङो देश नै खतरामा परेको छ । यस्ता व्यवहार हुन्छ भन्ने थाहा पाएर नै आज सयौ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरु आफ्नो पहिचान खुलाउन चाहदैनन जस्को कारण उसको सम्पर्कमा आएका धेरैमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिन सक्ने डर हुन्छ , हाम्रो यस्तै व्यवहारले कोही व्यक्ति आफ्नो पहिचान नै परिक्षण कै बेला लुकाउछन यसले समाजमा संत्र mमणमा जोखिम कति बढ्छ अनुमान गर्न सक्दैनौ । यसमा कोरोना संक्रमित भन्दा पनि समाजमा छिछी दुरदुर गरी भेदभाद गर्ने व्यक्तिको गल्ती देखिन्छ । यदि कोही संक्रमित भए उनीहरुलाई पक्कै त्यही बेला भेट्न सम्भब नहोला तर प्रविधिको प्रयोग गरी उनीहरुको आत्मबल बढाउन हामीले सक्नु पर्छ । समाजमा भएका यस्ता भेदभावको अन्त्य गर्नै पर्छ । हामीले एक अर्कालाई भेदभाब गर्ने हो, बिरामीको आत्मबल गिराउन खोज्ने हो भने विवेकशिल प्राणी भनी आफुलाई पारीचित गराउनु पनि लज्जित हुनुपर्छ ।
सरकार , नागरिक, न्यायलय , समाज सबैले यस्तो बातावरण निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ स्वास्थ्यकर्मी, कोरोना सङ्क्रमित , कोरोना जिती घर फर्केकाहरुको आत्मबल गिराउने खालको कार्य कहिल्यै नहोस । अझै पनि उचित शिक्षा र जनचेतनाको अभाब देखिदै छ । कोरोना जिती आएको व्यक्ति समाजका लागि खतरानाक हुन्छन भन्ने कुरामा अझै भ्रम मै छ समाज । जुन चिर्न निकै आवश्यक छ । त्यसको लागि बिशेषज्ञ , सरकारको भूमिका निकै नै आवश्यक पर्छ । कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएकाहरुलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्न कोरोना जितेकाहरुको बारे यथार्थ र भाइरसको बाच्ने अवधि बारे जनचेतना कार्यक्रम सरल सबैले बुझ्ने गरी गर्नु निकै जरुरी रहेको छ । जनचेतनाको कमिले जसरी अन्य विभिन्न भेदभाव छुवाछ्त अझै समाजले जरा गाडेको छ त्यस्तै कोरोना जितेर समाजमा फर्केकाको हकमा पनि त्यस्तै नहोस भन्न पनि जनचेतना कार्यक्रम गर्नु निकै जरुरी छ । जनचेतनाको कमिले कोही पनि कसैको आत्महत्याको कारक नबनोस यसमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुनु निकै जरुरी देखिन्छ ।
हामीले समाजमा गर्ने बानीका कारणले नै समाजमा कोरोनाको जोखिम बढ्दो छ । सामाजिक बहिस्कारको डरले नै गर्दा आफ्नो पहिचान खुलाउन कसैले चाहदैनन जस्ले गर्दा जोखिम थप बढ्दो छ । कोरोना सङ्क्रमितहरुलाई आफ्नो पहिचान खुलाउदा सामाजिक भेदभावको डर रहने बातावरणको अन्त्य गरी छरछिमेक साथीभाइ परिवारमा सामाजिक सद्भावको बातावरण बनाउन हामी सबैले उचित भूमिका खेल्नु पर्छ । त्यसंले रोग लागेको बेला सबै भन्दा ठूलो औषधि भनेको नै आत्मबल हो । उचित जनचेतनाका कारण सामाजिक भेदभावलाई उन्मूलन गर्न पनि सक्दछ र यस सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ । मनिसहरु को आत्मबल बढाउन र सामाजिक सद्भाव अन्त्य हुन नदिन कोरोना अपराध होइन , रोग जसलाई पनि लाग्न सक्छ भन्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ अनि मात्र मानिसहरुलाई खुल्ला र सार्वजनिक रुपमा मलाई कोरोना लाग्यो मेरो सम्पर्कमा आएकाहरु गएर कोरोना परीक्षण गराउनु भन्न सक्ने अवस्थामा रहन्छन।
सामाजिक सद्भावका लागि सबैले यसबेला मानवता र कसैको आत्मबल बढाउन सङ्क्रमितहरुलाई हौसला दिने,कोरोना जितेर घर फर्केकाहरुलाई सामाजिक भेद्भाव नगरी समाजमा कुनै पनि रोकावट बेगर समाजमा पुनस्र्थापना गर्न हामीले भूमिका खेल्ने हो भने कसैले पनि आफ्नो परिचय लुकाउदैन होला र सामाजिक भेद्भावको डरले कोरोना सङ्क्रमण लुकाउदा हुने जोखिमलाई पनि न्युनिकरण गर्छ नै , त्यसैले कोरोना जितेर फर्केका, उपचारमा १४ घण्टा सम्म डाइपर लगाएर खट्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उनीहरुको आत्मबल बढाउन हामीले सद्भावको भावना देखाउनु पर्छ ।
कोरोना लाग्नु र कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्नु भनेको अपराध गर्नु होइन त्यसैले सङ्क्रमित र स्वास्थ्यकर्मी प्रति सबैले सम्मान व्यक्त गरौ । के कसैलाई कोरोना संक्रमित भयो भने उसले समाजको लागि अपराध गरेको हुन्छ ? रोग हो जसलाई पनि लाग्छ । समाजबाट अपहेलित गराउने काम बन्द गरौ । भोलि तपाईलाई पनि पर्न सक्छ । तपाईलाई कसैले त्यस्तो व्यवहार गर्याे भने कस्तो लाग्छ आफै सोचौ ।